Zava-Nahagaga Kely tamin’ny Fifidianana Parlemantera tany Timor Atsinanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jolay 2012 13:08 GMT
Isan'ireo isa manan-danja ireo ambony ireo raha nanao ny fifidianana parlemanterany i Timor Atsinanana ny 7 Jolay 2012. Ity izany no fifidianana fahatelo tamin'ity taona ity hatramin'ny nisian'ny fifaninanana ho filoham-pirenena indroa miantoana tamin'ny 17 Martsa sy 16 Aprily 2012.
Nanolotra valim- pifidianana tsy ofisialy sy ny isan'ny seza ho azon'ny antoko mpandresy i La'o Hamutuk:
Raha ny valim-pifidianana feno voalohany navoakan'ny STAE, dia ho toy izao no hizarana ny seza 65 eo amin'ny parlemanta manaraka any Timor Atsinanana, raha ny fomban'ny 3% Threshosld sy D'Hondt no ampiasaina hanomezana ireo seza ireo:
Antoko mpikarakara ny antontan-taratasy ny CNRT ary ny Freitlin kosa no mpanohitra mavesa-danja. Namerina nijery ny valim-pifidianana sy ny fidiran'ireny amin'ny ara-politika i The Lost Boy:
Nanamarika ny tsy fisian'ny vaovao avy amin'ny haino aman-jery iraisam-pirenena ihany koa ny mpanoratra.
Ny International Foundation ho an'ny Rafi-Pifidianana no nitantana ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny voalohandohan'ity taona ity ary nanome ireto lisitry ny tsy fanarahan-dalàna ireto izay soa ihany fa efa noresahana talohan'ny fifidianana parlemantera tamin'ny faran'ity herinandro ity:
Nirongatra ny tsy fanarahan-dalàna nandritra ireo fihodinana roa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny Martsa sy Aprily 2012. Niatrika tsy fahampianà vatom-pifidianana ny faritra sasany teto amin'ny firenena noho ny hadisoan'ny fanombanana ny tahan'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana. Fanampin'izany, nosimbain'ny andro ratsy ny vato sasany ary nanano-sarotra ny fandaminana ny fitaovana. Teo ihany koa ny tranga notaterina mikasika ny kalitaon'ny ranomainty tsy mety voafafa sy ny mpifidy mampiasa finday misy fakan-tsary hakana sary ny vatom-pifidianana nisy marika.
Niasa niaraka tamin'ny mpanara-maso iraisam-pirenena i Timor Atsinanana sy ny Indonesia Action Network teo amin'ny fanaraha-maso ny valim-pifidianana.
Ny tenifototra #eleisaun2012 sy #timorelections no nampiasaina hitaterana ilay fifidianana. Ireto misy fihetseham-po vitsivitsy:
@yatespj tantara be avy amin'ny #eleisaun2012 ny fanjavonan'ireo antoko madinika – ary koa tsy nifantoka tamin'izy ity, toy izay nataon'ny CNRT&FRETILINA, ny PD.
@georgedarroch Vita izao ny fampielezan-kevitry ny Euro & #Eleisaun2012 dia hangingina. Tsy misy intsony ny afomanga amin'ny 6am, ny fandehandehanana bisikileta, kamiao mitondra tanora mitsinjantsinjaka.
@ReesEdward manamafy manome tanjaka ara-politika kokoa ny Xanana miaraka amin'ny volan'ny solika/angovo oharina amin'ny FRETILIN. Vita ve izany ny ho avin'ny politikan'ny Alkatiri?